MacBook Pro miaraka amina processeur M1X ho an'ny WWDC | Avy amin'ny mac aho
Ny karazana tsaho rehetra dia mipoitra foana izay miresaka ny fahatongavan'ny a MacBook Pro vaovao miaraka amina processeur matanjaka kokoa noho ny M1 ankehitriny ho an'ny WWDC na koa taloha kokoa aza. Mazava fa tsy voatery ho marina foana ny tsaho fa amin'ity tranga ity dia efa niresaka momba ny fahatongavan'ireo ekipa vaovao isika nandritra ny volana maro ary mety havoaka haingana kokoa noho ny eritreretinay izany.
Mazava ho azy fa any Apple dia mandeha haingana be ny zavatra ary vetivety dia manana ny processeur M1 isika saingy azo antoka fa efa nihatsara ireo manaova amin'ny hery bebe kokoa ary ambonin'izany rehetra amin'ny fahombiazan'ny angovo lehibe kokoa amin'ny solosaina Mac manaraka.
14- sy 16-inch MacBook Pro miaraka amin'ny M1X
Taorian'ny fahatongavan'ny M1 tamin'ny iPad Pro vaovao dia efa nieritreritra momba ny fampiharana ireo mpikirakira M1X ho an'ny Mac manaraka ny orinasa. Mazava ho azy fa mino izahay fa "efa tao anaty lafaoro ela" ireto mpikirakira ireto ary ny MacBook Pros 14-inch sy 16-inch dia ho voalohany hampihatra azy ireo.
Ny hazakazaka hahazoana fampisehoana tsara kokoa, ny fahombiazana tsara kokoa ary ny vidiny mora vidy kokoa ho an'ireo mpikirakira ireo dia efa elaela ary rariny amin'ny Fandefasana ny MacBook Air, MacBook Pros 13-inch, ary Mac mini tamin'ny taon-dasa rehefa tena nanomboka ny diany.
Nanomboka tamin'io fotoana io ka androany dia ny tsaho momba ny mety hanombohan'ny Apple M2 na fanatsarana M1 no zava-dehibe, vao tsy ela akory izay ny tsaho momba ny processeur Apple Silicon M1X dia azo inoana fa na dia talohan'ny WWDC aza amin'ity taona ity dia manana ireto ekipa ireto isika natolotra. Misy aza ny firesahana ny amin'ny mety hanombohana iMac Pro, ekipa iray izay ho mahery vaika kokoa noho ny ankehitriny fa manana endrika mitovy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » MacBook Pros miaraka amin'ny processeur M1X ho an'ny WWDC